Ukuvinjelwa kweFil William Henry kwiMfazwe yaseFransi neyamaNdiya
Imbali kunye neNkcubeko Imbali yaseMelika yaseMelika
Ukuvinjelwa kwe Fort Fort Henry Henry kwenzeka ngoAgasti 3-9, 1757, ngexesha leMfazwe yaseFransi neyamaNdiya (1754-1763) .Nakuba izixuku phakathi kwemikhosi yaseBrithani neFransi emdeni wawukhule iminyaka emininzi, iMfazwe yaseFransi neyamaNdiya ungaqalanga ngokunyanisekileyo kwaze kwaba ngu-1754 xa umyalelo weLieutenant Colonel George Washington wahlulwa kwi-Fort Kubalulekile entshona iPennsylvania.
Ngomnyaka olandelayo, ibutho elikhulu laseBrithani eholwa nguMagosa Jikelele u-Edward Braddock wachithwa kwi- Battle of the Monongahela ezama ukuphindiselela iWashington ekutshatyalazweni aze athathe i-Fort Duquesne.
Ngasenyakatho, iBrithani yahamba ngcono njengoko i-Agent Indian agent uSir William Johnson ekhokele amaqhawe kwi- Battle of Lake George ngoSeptemba 1755 waza wathabatha umlawuli waseFransi, uBaron Dieskau. Ekuvukeni kwalo myalelo, iRhuluneli yaseNew France (eCanada), iMarquis de Vaudreuil, yalela ukuba i Fort Fortillon (iTiconderoga) yakhiwe ngasekupheleni kweLake Champlain.
Ephendula, uJohsonson wayala uMnumzana uWilliam Eyre, unjiniyela wezempi weSizwe se-44 seLinyawo, ukwakha i-Fort William Henry ngaselunxwemeni lwaseLake George. Esi sikhundla sasixhaswa yi-Fort Edward esasiseMlambo i-Hudson malunga neekhilomitha ezilishumi elinesithandathu ukuya ngasezantsi. Eyakhelwe kwidrafti yesikwere kunye neziseko kwiingqungquthela, iindonga ze-Fort William Henry zazingamamitha angamashumi amathathu ubukhulu kwaye ziqulethwe umhlaba. Iphephancwadi ye-fort yayisemgangathweni esenyakatho-ntshona ngelixa isibonelelo sezonyango safakwa kwicala lokumzantsi-mpuma.
Njengoko kwakhiwe, i-fort yayenzelwe ukuba ibambe igogo lama-400-500 amadoda.
Nangona kunzima, i-fort yayijoliswe ekuhlaseleni ukuhlaselwa kweMelika yaseMelika kwaye ayizange yakhiwe ukulwa nokulwa nezixhobo zokulwa. Nangona udonga olumntla lujongene nolwandle, ezinye ezintathu zakhuselwa ngumkhumbi owomileyo. Ukufikelela kwi-fort kwanikezelwa ibhuloho kulo mxobo.
Ukuxhasa i-fort kwakukho ikampu enkulu enqamlekileyo enomgama omfutshane ukuya ngasempuma-mpuma. Ukuvalelwa ngamadoda e-Eyre, i-fort yabuya ehlaselwa yiFransi, ekhokelwa nguPeter de Rigaud ngo-March 1757. Oku kubangelwa kukuba amaFrentshi ayeswele izibhamu.
Njengoko ikhefu lomkhankaso we-1757 lafika, umlawuli omtsha waseBrithani oyintloko eNyakatho Melika, iNkosi uLoudoun, wangenisa izicwangciso zaseLondon ecela ukuhlaselwa kweQuebec City . Iziko lemisebenzi yaseFransi, ukuwa kwe sixeko kuya kunqumla impi yamabutho entshonalanga nakumazantsi. Njengoko lesi sicwangciso saqhubela phambili, uLoudoun inqwenela ukuthatha indawo yokuzimela emzimbeni. Wayevakalelwa kukuba oku kuya kwenzeka xa ukuhlasela kweQuebec bekuza kubamba iifomu zaseFransi kude nomda.
Ukuqhubela phambili, uLoudoun waqala ukuhlanganisana nemikhosi efunekayo yokuthunywa. Ngenyanga ka-1757, wathola amagosa avela kuorhulumente omtsha kaWilliam Pitt wamqondisa ukuba atshintshe iinzame zakhe zokuthatha inqaba yaseLouisbourg eCape Breton Island. Ngoxa le nto yayingayitshintshanga ngokulungelelaniswa ngqo noLoudoun, yatshintsha ngokuphawulekayo imeko yeqhinga njengokuba i-mission entsha yayingeke ikwazi ukukhupha amabutho aseFransi kude nomda. Njengoko usebenze ngokubhekiselele eLouisbourg kuqala, iiyunithi ezifanelekileyo zanikwa ngokufanelekileyo.
Ukukhusela umda, uLoudoun wakhetha uBrigadier Jikelele uDaniel Webb ukuba alungiselele ukukhusela eNew York kwaye wamnika ama-2 000 rhoqo. Eli qela laliza kuhlonyiswa ngama-5,000.
ENew France, umlawuli wasekhaya uVaudreuil, uMninimandla Jikelele uLouis-Joseph de Montcalm (uMarquis de Montcalm), waqala ukucwangcisa ukunciphisa iFort William Henry. Etshatshulwa kwi-Fort Oswego kunyaka odlulileyo, wayebonise ukuba amaqhinga aseJurophu angqongqo angasebenza ngokubhekiselele eNorth America. Inethiwekhi ye-intelligence yaseMontcalm yaqala ukumnika ulwazi olucebisa ukuba injongo yeBritani ngo-1757 yayiza kuba yiLoubbourg. Eqaphela ukuba umzamo onjalo wawushiya iBritish ebuthathaka emngceleni, waqala ukuqokelela amabutho ukuba ahlasele emzantsi.
Lo msebenzi wasinceda nguVaudreuil owayenako ukufumana aba-1 800 baseMelika baseMelika ukuba bancedise umkhosi kaMontcalm.
Ezi zithunyelwa eningizimu kwiFort Carillon. Ukudibanisa ibutho elidibeneyo labangama-8,000 amadoda e-fort, uMontcalm waqala ukulungiselela ukuya ngaseningizimu neFort William Henry. Nangona wayenomdla, amaqabane akhe aseMerika asele ayenzima ukulawula kwaye aqala ukuphatha kakubi kwaye ahlasele amabanjwa aseBritani kwinqaba. Ukongezelela, babehlala bathatha ngaphezu kwezabelo zabo kwaye bafunyaniswa ukuba bahlukumeza amabanjwa. Nangona uMontcalm enqwenela ukuphelisa ukuziphatha okunjalo, wafaka umngcipheko kumaMerika aseMelika ukuba ashiye umkhosi wakhe ukuba wayenzima kakhulu.
E-Fort William Henry, umyalelo wada waya eLieutenant Colonel George Monro kwi-35th Foot ngasekuqaleni konyaka ka-1757. Ukumisela ikomkhulu lakhe kwikampu enqatyisiweyo, uMonro wayenamadoda angama-1,500. Wayexhaswa nguWebb, owayese-Fort Edward. Ukwaziswa kwesiFrentshi kwakha, i-Monro yathumela iqela elibhekiselele echibini elaliqhutywe kwi-Battle of Day Sabbath Point ngoJulayi 23. Ekuphenduleni, iWebb yahamba eya eFort William Henry kunye nenqwelana yaseConnecs i-Rangers eholwa ngu-Major Israel Putnam.
Ukukhangisa ngasentla, uPutnam wachaza indlela yoMbutho waseMerika waseMelika. Ukubuyela e-Fort Edward, i-Webb iholele ama-200 rhoqo kunye nama-800 aseMassachusetts ama-ambitiamen ukuqinisa igumbi likaMonro. Nangona oku kwandisa ibutho lamadoda angama-2 500, amaqela amaningana ayegula ngengqungquthela. NgoJulayi 30, uMontcalm wayala uFrançois de Gaston, uChevalier de Lévis ukuba ahambe ngasemzantsi ngamandla. Emva komhla olandelayo, waphinda waya eLévis eGanaouske Bay.
Ukuphinda uqhube phambili, uLévis wakha iikhilomitha ezintathu kwi-Fort William Henry ngo-Agasti 1.
Imikhosi & Abalawuli
ULieutenant Colonel George Monro
Amadoda angama-2 500
AbaFrentshi nabemi baseMerika
IMarquis de Montcalm
malunga. 8,000 amadoda
Kwiintsuku ezimbini kamva, uLévis wadlulela eningizimu kwinqaba waza wayigxotha indlela eya e-Fort Edward. Ukuqinisekisana namaMassachusetts aseMassachusetts, bakwazi ukugcina i-blockade. Ukufika kamva ngemini, uMontcalm wacela ukuzinikela kukaMonro. Esi sicelo satshatyalaliswa kwaye uMonro wathumela abathunywa baseningizimu kwi-Fort Edward ukuba bafune uncedo kwi-Webb. Ukuvavanya imeko kunye nokungabi namadoda aneleyo kumncedisi uMonro kunye nokugqithisa inkunzi ye-colonial yaseAlbany, iWebb yaphendula ngo-Agasti 4 ngokumxelela ukuba afune iimeko ezingcono zokuzinikela xa ziphoqelelwe ukuba zithathwe.
Ifunyenwe yiMontcalm, isigidimi sazisa umlawuli waseFransi ukuba akukho ncedo oluya kuza kwaye uMonro wayekhethiwe. Njengoko i-Webb ibhala, uMontcalm wayalela uColonel François-Charles de Bourlamaque ukuba aqalise ukusebenza. Ukumba iinqwelo ezikumntla-ntshona kwinqaba, iBourlamaque yaqalisa ukufaka imipu yokunciphisa isiseko se-fort. Kugqitywe ngo-Agasti 5, ibhetri yokuqala yavula umlilo kwaye yaxabela izindonga zeenqaba ukusuka kwii-2,000 iiyadi. Ibhetri yesibini yagqitywa ngosuku olulandelayo waza waletha isiseko phantsi komlilo. Nangona i-Fort William Henry izibhamu zaphendula, umlilo wabo wawubonakala ungasebenzi.
Ukongezelela, ukukhusela kwakuncitshiswa yinxalenye enkulu yegumbi eligulayo. Ukuqhayisa iindonga ngobusuku ka-Agasti 6/7, amaFrentshi aphumelela ekuvuleni izikhalazo ezininzi.
Ngomhla ka-Agasti 7, uMontcalm wathumela umncedisi wakhe, uLouis Antoine de Bougainville, ukuba aphinde acele ukuba kunikezelwe i-fort. Oku kwaphinde kwaliwa. Emva kokunyamezela olunye ubusuku kunye nobusuku bombhobholo kunye nokukhusela kwinqaba kunye neentlanzi zaseFransi ziza kutsala, uMonro wafaka ifulegi emhlophe ngo-Agasti 9 ukuvula iingxoxo zokuzinikela.
Ukunikezela kunye nokubulala
Intlanganiso, abalawuli baqulunqa ukuzinikela kunye noMontcalm banikezela imimiselo yaseMonro eyabavumela ukuba bagcine iimiskets kunye nekhonkoni enye, kodwa akukho zixhobo. Ukongezelela, babeza kuhanjiswa kwi-Fort Edward kwaye bavunyelwe ukulwa neenyanga ezilishumi elinesibhozo. Ekugqibeleni, abaseBrithani babeza kukhupha amajele aseFransi. Izindlu zaseBrithani eenkampini ezisemgangathweni, uMontcalm uzame ukuchazela imigaqo yabalingani bakhe baseMelika.
Oku kubonakala kunzima ngenxa yamanani amaninzi asetyenziswe ngabantu baseMerika. Njengoko imini idlulile, amaMerika aseMelika aphanga inqaba kwaye abulala amaninzi amaninzi aseBrithani awayeyishiywe kwiindonga zawo unyango. Ukwandisa ukukwazi ukulawula amaMerika aseMelika, ayenomdla wokuphanga kunye ne-scalps, uMontcalm noMonro banquma ukuzama ukufudula igumbi langasemzantsi ngalobo busuku. Esi sicwangciso sahluleka xa amaMerika aseMelika ayazi ngokunyaniseka kweBritish. Ukulinda kude kube ngentsasa ngo-Agasti 10, ikholomu, eyabandakanya abafazi nabantwana, yakhiwa kwaye yanikezwa ngumntu oneminyaka engama-200 ehambelana noMontcalm.
Xa abantu baseMerika bexhamla, ikholomu yaqala ukuhamba endleleni yezempi ezantsi. Njengoko kwaphuma ikampu, amaMerika aseMelika angena abulala amajoni ayishumi elinesibhozo awalishiyelweyo. Emva koko bawela emva kwekholam ekwahluke ngokubanzi ngamagosa. Ukumiswa kwabizwa kwaye kwenziwa umzamo wokubuyisela umyalelo kodwa akukho nto. Ngelixa amanye amagosa aseFransi azama ukumisa amaMerika aseMelika, abanye baye bahamba. Ngamahlaya aseMerika asehla ngokunyuka ngamandla, ikholomu yaqala ukutshabalalisa amaninzi amabutho aseBrithani abalekela emaplanga.
Ukuqhubela phambili, uMonro wafikelela e-Fort Edward kunye nabantu abangama-500. Ekupheleni kwenyanga, i-1,783 yenkampu yamadoda angama-2,308 (ngo-Agasti 9) yayifikile e-Fort Edward kunye nabaninzi benza indlela yabo kwihlathi. Kwindlela yokulwa neFort William Henry, iBrithani yahlala malunga nama-130 abulawayo. Uqikelelo lwangoku nje ukulahleka kwendawo ngexesha lokubulawa kwabantu ngo-Agasti 10 ku-69 ukuya ku-184 kwabulawa.
Emva kokuhamba kweBrithani, uMontcalm wayala ukuba iFort William Henry idibaniswe ize ichithe. Ukungabikho kwempahla eyaneleyo kunye nezixhobo zokunyathela kwi-Fort Edward, kunye nabalingani bakhe baseMelika basele, uMontcalm ukhethwe ukuba abuyele e-Fort Carillon. Ukulwa eFort William Henry kwandiswa ngo-1826 xa uJames Fenimore Cooper epapasha incwadi yakhe yokugqibela yeMoccans .
Ekuvukeni kwelahle, i-Webb yasuswa ngenxa yokungabi nanyathelo. Ngenxa yokungaphumeleli kwehambo laseLouisbourg, uLoudoun waphuhlulwa kwaye watshintshwa nguMagoli Jikelele uJames Abercrombie. Ukubuyela kwisiza seFort William Henry ngonyaka olandelayo, u-Abercrombie wenza iphulo elibi eliphelile ngokulwa kwakhe kwiViyo yaseCarillon ngoJulayi-1758. Ekugqibeleni amaFrentshi aya kunyanzelwa kuloo ndawo ngo-1759 xa uMongameli Jikelele uJeffery Amherst sinyuka ngasentla.
Imbali emva kweCock Case